सडक दुर्दशा र सम्मेलन मनोविज्ञान | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सडक दुर्दशा र सम्मेलन मनोविज्ञान
on: ८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०६:३६ सम्पादकीय
सडक दुर्दशा र सम्मेलन मनोविज्ञान
काठमाडौंमा भदौ १४ र १५ मा बिमष्टेक सम्मेलन हुने भएपछि अहिले धमाधम सडक पीच गर्ने र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । हामी पाहुना आउँदा सकेसम्म राम्रो देखाउन खोज्छौं, सफासुग्घर गर्छौं । यो हाम्रो परम्परा हो र स्वाभाविक पनि । तर, हामीकहाँ सडक निर्माणमा चरम बेथिति र लापर्बाही छ । विदेशी पाहुना आउँदा सडकपीच गरिन्छ । तर, त्यो केही दिनपछि नै भत्कन थाल्छ । केही महीनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा पीच गरिएका सडक अहिले काम नलाग्ने भएका छन् । यति छिटो पीच विश्वमा कहीँ पनि भत्कन्न । सडक विस्तारका नाममा भत्काइएको सडक वर्षौं बित्दा पनि पीच भएको छैन । धूवाँ, धूलो र पानी जमेर लाखौं जनताले सास्ती पाए । सरकारको विरोध गरे तर सरकारले सुन्दै सुनेन, देख्दै देखेन । अहिले विदेशी पाहुना आउने भएपछि भने धमाधम पीचको काम भइरहेको छ । न अदालतको आदेशले रोकेको छ, न स्थानीयको विरोध न त बजेट अभाव नै । यस्तो चमत्कार सडक विभागले कहाँबाट पायो ?
सडकको मात्रै कुरा होइन, अन्य शहरी पूर्वाधारमा पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका समयमा अचम्मै लाग्ने गरी छिटोछरितो काम हुने गरेको छ ।
सडकको मात्रै कुरा होइन, अन्य शहरी पूर्वाधारमा पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका समयमा अचम्मै लाग्ने गरी छिटोछरितो काम हुने गरेको छ । सार्क सम्मेलनका बेला नगरपालिका, सडक विभाग र अन्य विभागको सक्रियता देखिएकै हो । उनीहरूले सम्मेलनका बेला मात्रै काम गर्ने अख्तियारी पाएका होइनन् । त्यो उनीहरूको नियमित काम नै हो । सम्मेलनका बेलामा काम गर्नु र अरू बेला निदाउनुको कारण के होला ? यस्तो प्रवृत्ति पञ्चायत कालदेखिकै हो । सम्मेलनका बेलामा बजेट निकासादेखि कामको गति अकस्मात् बढेको पाइन्छ । राष्ट्रको इज्जत जोगाउन यसो गरिएको भन्ने तर्क पनि कर्मचारीहरूको पाइन्छ । वास्तविकता भने त्यो नभएर यसमा गर्न पाइने अपारदर्शी कारोबार नै हो । सम्मेलनको मिति धेरै अघि तय भए पनि समय छउन्जेल काम गर्दैनन् । अन्तिममा हतारहतार काम गर्छन् । अन्तिम समयमा छिटो काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले दिने निर्देशनले पनि काम गरेको होला । तर, यस्तो निर्देशन समयमा दिएर काममा लगाउन सरकार किन सक्दैन ?
सरकारका लागि जनता महत्त्वपूर्ण कि पाहुना भन्ने प्रश्न यस्तो सम्मेलनमा उठ्ने गरेको छ । सम्मेलनमा आउने अतिथिलाई देखाउन रातारात सडक पखालिन्छ । नगरप्रमुखदेखि सचिवसम्म राति सडकमा खटेर सवारी हुने बाटो चिल्लो बनाइन्छ । वर्षौंदेखि धूवाँ र धूलोले स्थानीयमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिँदासमेत सरकारी निकायले कुनै चासो देखाउँदैन । आफ्ना जनतालाई पूर्ण अपेक्षा गर्ने अनि अतिथिका लागि भने जस्तोसुकै खर्च पनि गर्न सक्ने सरकारी मनोविज्ञान उदेकलाग्दो छ आलोचना हुने गरेको छ ।
यस्तो सम्मेलन र समारोहका बेलामा मात्रै काम गर्ने मानसिकतामा भ्रष्टाचार र अनियमितताले काम गरेको पाइन्छ । यस्तो सम्मेलनका बेलामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण राम्ररी हुन्न, खर्चको वैधता पनि हेरिन्न । कुन कामका लागि कति खर्च आवश्यक थियो भन्ने भन्दा पनि काम भएको मात्र हेरिन्छ । त्यसो हुँदा यो समय कर्मचारीका लागि कमाउने अवसर हो । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा पार्क बनाउने र शहर सजाउने नाममा नगरपालिका र अन्य सरोकारका निकायले माग गरेको रकम र त्यो खर्चको विवरण हेर्दा नै यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा निर्माणको गुणस्तर निकै कमजोर हुन्छ । त्यसमा पनि यस्तो सम्मेलनका बेलामा गरिने निर्माणको गुणस्तरको कसैले रेखदेख गर्दैन । सबै देखावटी काममात्रै हुन्छ । सार्क सम्मेलन, मोदीको दुईपटक भएको भ्रमणका बेलामा गरिएको पीचको नामोनिशान छैन । ५ महीनापछि नटिक्ने पीच बनाएकोमा महालेखा, अख्तियार कसैको आँखा पनि परेन । अहिले त्यही ठाउँमा फेरि पीच गरिँदै छ । अतिथिको सवारी नहुने बाटाको हालत भने दशकौंदेखि बिचल्ली छ । तर, त्यहाँ पीच गर्न वा ढलनिकास मात्रै बनाउन पनि सरकारी निकायले कानमा तेल हालेर बसेको पाइन्छ । यस्तो चरम बेवास्ता कहिलेसम्म ?